MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA POMERANIAN - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Pomeranian
Gabayga Pommania ee Mooshinka iyo Pommania Ms Dynamite. Walaalaha qashinka ah ee ka soo jeeda khadadka aadka u fiican waa ciyaal qurux badan oo muujinaya gabadh. Lahaanshaha sawirka Pommania Pomeranians
Pomeranian waa eey yar oo cabbirkiisu le'eg yahay. Madaxu waa qaab-xajmi ah oo u dhigma jirka. Afka gaaban waa toosan yahay waana hagaagsan yahay. Joogsiga ayaa si fiican loogu dhawaaqaa. Midabka sanka ayaa ku kala duwan midabka jaakada. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha qaabeeya yicibta waa mugdi iyo cabir dhexdhexaad ah. Dhagaha yaryar ee kacsan sare ayaa loo dhigay. Dabada baalasha ayaa si toosan u jiifsan oo fidsan dhabarka. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Pom wuxuu leeyahay jaakad qaro weyn oo laba jibbaaran. Dharka kore waa dherer, toosan oo qallafsan qaab ahaan, halka joodariga uu yahay mid jilicsan, qaro weyn oo gaaban. Koodhku wuu ka dheer yahay qoorta iyo xabadka. Wuxuu ku yimaadaa midabbo jaakadyo kala duwan iyo qaabab ay ka mid yihiin casaan, oranji, caddaan, kareem, buluug, bunni, madow, madow iyo madow, yey sable, oranji liin ah, gogol-xaadh iyo midab-midab, kaas oo cadaan leh calaamado midabbo leh.
cocker Ingiriisi spaniel midabyo beerka
Pomeranian-ku waa eey faan badan oo nool. Waa mid caqli badan, diyaar u ah inuu wax barto, aadna ugu daacadsan cidda maamusha iyo qoyskeeda. Pom waa wehel la yaab leh oo eey show ah. Dabeecadda dabeecadda dabeecadda leh iyo dabeecadda kalgacalka leh ayaa ku jeclaata dad badan. Waa feejignaan, baaris iyo firfircoon: mid ka mid ah kuwa ugu madax bannaan noocyada toy-yada, waxay u baahan tahay gacan adag, jilicsan. Noloshiisa iyo ruuxiisa ayaa ka dhigaysa mid ay si fiican u jecel yihiin dadka aan inta badan daryeeleyn eeyaha toy-ka. Pomeranians-ka waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa wax cuna. Haddii si habboon loo barto waxay caadi ahaan la wadaagaan eeyaha kale iyo xayawaanka guryaha deggan dhibaato la'aan. Poms ayaa sameeya waardiyeyaal yar oo wanaagsan. Bar eygan goor hore in uu ciyi karo dhowr jeer marka uu garaacayo albaabka ama marka ay jiraan dad soo booqda, laakiin markaa ka dib aamus. Aad uga noqo arrintan. Poms waxay leeyihiin dabeecad farxad leh oo kuma dhegaan kuwa iyagu maamula. Ardaygan faraxsan wuxuu ku fiican yahay barashada tabaha. Pomeranians-ka waxay u baahan yihiin inay milkiilayaashooda u arkaan inay madax yihiin ama haddii kale waxay noqon doonaan dad aad u baahan. Haddii aad u oggolaato eeygaaga inuu kuu sheego goorta iyo meesha laga qabanayo wax ka badan intaad dhibaato ku haysato gacmahaaga oo xitaa ma ogaan kartid. Maaha wax qurxoon ama caqli badan, waa xukunka oo waxay u horseedi doontaa dhibaatooyin waaweyn mustaqbalka haddii aysan horey u lahayn. Sababtoo ah noocyadan yar yar iyo wejiga la jecel yahay ee Ewok-u eg, waxaa jira boqolkiiba aad u sareeya Poms oo ku dhaca dhibane Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya halka eygu aaminsan yahay inuu yahay hogaamiyaha xirmada aadanaha. Tani waxay sababi kartaa darajooyin badan oo kala duwan dhibaatooyinka dhaqanka , kuwaas oo AAN ahayn sifooyinka Pomeranian-ka, laakiin dabeecado ay keeneen sida loola dhaqmo aadanaha ku hareeraysan . Dabeecadaha waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn kala-go'id walaac , noqoshada rabitaan, cabsi, geesinimo iyo mararka qaarkood dabeecad leh, oo aan ka waabanayn inaad weerartid eeyo aad u waaweyn. Ilaalinta dabeecadaha iyo qaylada xad dhaafka ah markay iskudayaan una sheegaan BILAADKOODA waxa ay rabaan inay sameeyaan. Waxay la noqon karaan kuwo ajaanib ah, iyaga oo si xad dhaaf ah u ciyey, mararka qaarkoodna qaylinaya, xoqitaan iyo qaniinyo. Sababtoo ah bini'aadamka badankood waxay ula dhaqmaan kaniinkan yar hab aan eeygu u arkin inay yihiin hogaamiye xirmo, laguma talin karo carruurta. Si kastaba ha noqotee, haddii Pom la siiyo sharciyo la raaco, xaddidaadda waxa loo oggol yahay inay sameyso, socod xirmo maalinle ah iyo degganaan, hoggaamiye xirmo isku kalsoon oo muujiya kalsooni kalsooni leh eeyga, tani waxay noqon kartaa mid si fiican loo soo koobay, maskax ahaan deggan, aamin ah, wehelka qoyska ee cajiibka ah. Cabirkeeda darteed, waxay wehel wanaagsan u noqon kartaa qof da ’ah.
Dhererka: 7 - 12 inji (18 - 30 cm)
Miisaanka: 3 - 7 rodol (1 - 3 kg)
1800-meeyadii Pomeranians-ka ayaa culeyskoodu noqon karay 30 rodol. Poms-ka waaweyn ee maanta muuqda waxaa badanaa loogu yeeraa 'tuurista' Pomeranians.
Roomaaniyiintu waxay u nugul yahiin patella kala-baxa (jilibka jilibka), qiiq yar oo la siibto, dhibaatooyinka wadnaha, caabuqyada indhaha, cuncunka maqaarka iyo suus ilkaha iyo lumitaanka hore Waxaa lagula talinayaa in la siiyo cuntada eeyga qalalan ama Lafaha Caano cufan maalin kasta si ay uga caawiyaan inay ilkaha iyo cirridku xaalad wanaagsan ku hayaan. Dhallaanka Pom ee dhasha ah waa kuwo aad u yar oo jilicsan. Saddex carruur ah oo dhasha ah ayaa lagu hayaa calaacasha gacanta midkood. Biyo-xireennada dhinaca yar yari waxay badanaa u baahan yihiin inay ku soo bixiyaan qalliinka. Marka eygu gaboobo waxaa ku dhalaali kara baro bidaar.
Pomeranian-ku wuxuu ku fiican yahay ku noolaanshaha guryaha. Eeyadan ayaa ah kuwo aad ugu firfircoon gudaha gudaha waxayna sameyn doonaan okay la'aan deyr. Ka taxaddar in aysan kululaynin xilliga kuleylka.
Poms ayaa u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli doontaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida deyr weyn oo ood leh.
Qiyaastii 15 sano
Qiyaastii 2-4 eey
Jaakada Pomeranian-ka oo aad u dheer, labbiska labiska ah waa in si joogto ah loo cadaydaa Haddii aad ka shaqeysid madaxa, jajabinta jaakadda oo aad horay u cadayaysid, si hufan ayey dib ugu laaban doontaa meeshii, marka hawsha, in kasta oo waqti qaadasho, haddana waa sahlan tahay. Koodhka suufka ah ee cudbirka ah ayaa la daadiyaa hal mar ama laba jeer sanadkii. Shaambo qallalan markii loo baahdo. Nadiifi indhaha iyo dhegaha maalin kasta oo u qaado eyga baaritaan ilkaha oo joogto ah. Pomeranian waa daadiyayaal joogto ah.
Pomeranian wuxuu magaciisa ka helay gobolka Pomerania, oo hadda ah aagga Jarmalka iyo Poland, halkaas oo laga soo saaray noocyadii hore ee Spitz. Ruumaaniyiintii asalka ahaa aad ayey uga weynaayeen, culeyskooduna waa 30 rodol, waxayna u shaqeeyeen sidii adhijir. Marie Antoinette, Emile Zola, Mozart iyo Queen Victoria oo dhammaantood lahaa Pomeranians. Sannadkii 1870-kii Kooxda Kennel ee Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay u aqoonsatay inay yihiin nooc. Sannadkii 1888-kii ayay boqoradda Victoria billawday taranta iyo tusidda eeyaha. Waxay ahayd iyadu kuwa bilaabay inay ku koraan iyaga oo cabbirkoodu sarreeyo, taas oo ka dhigaysa in taranka aad looga jecel yahay Ingiriiska. Pomeranian-ka waxaa markiisii ​​ugu horeysay aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1888. Qaar ka mid ah hibooyinka Pom-ka waxaa ka mid ah: ilaalin, firfircooni iyo qabashada tabaha. Poms ayaa sameeya kuwa sameeya circus.
Waqooyiga, AKC Toy
eyga in looks jeclaan jiir
Guri midabka madow iyo midka cad Pomeranian at 3 sano— 'Guri waa qof caqli badan oo daryeel badan. Ma joojin karo dhunkashada kuwa uu jecel yahay. Wuxuu saaxiib la yahay eeyaha kale wuxuuna leeyahay tamar badan. Waxa ugu badan ee uu jecel yahay waa kubadiisa yar. Isagu had iyo jeer waa bartamaha dareenka waana iska cadahay inuusan taas ka fikireynin. '
Ali kareemka Pomeranian oo 7 jir ah
'Kani waa Tchoupie (oo loogu dhawaaqayo Choppy), yey yey jilicsan Pom. Waxay ahayd qiyaastii 9 bilood markii sawirradan la qaaday. Tchoupie waa Pom tayo-soo-bandhig leh oo si fiican uga soo muuqday dhowr bandhig. Waxaan rajeyneynaa inaan dhameyno maalin uun, laakiin maxaa yeelay midabku waa mid gaar ah kaliya dhowr yey oo macquul ah Poms ayaa noqotay horyaal ilaa iyo haatan. Lahaanshaha sawirka Russ iyo Debby Bergeron
Tucker reer Pomeranian— WAAD KU MAHADSAN TAHAY macluumaadkan oo dhan . Waxaan heleynaa natiijooyin fantastik ah hal maalin gudaheed!
'Kujo shukulaatada merle Pomeranian-Waxaan qaatay gurmad Pom oo jacayl ayaan u qaaday isaga. Ka dib markii aan baaray caanaha illaa hal sano waxaan go'aansaday inaan helo Pom u gaar ah. Waxaan helay ninkan yar ee quruxda badan isla markiibana jacayl ayaa igu dhacay. Waan daawaday goobta waxaanan bilaabay baaritaan ku saabsan breed. Ka dib muddo bil ah oo aan la sheekaysanayay aargoosatada waxaan gartay in ninkan yari uu aniga igu fiicanyahay. Isagu waa 10 toddobaad sawirkaan gabi ahaanba waan jeclahay isaga. Wuxuu ka buuxa nolosha, aad u ciyaar badan, jacayl badan oo aad u caqli badan. In kasta oo aanu ahayn eey yappy ah, haddana had iyo jeer wuu fadhiistaa ka hor inta uusan ciyin, wuxuu leeyahay akhlaaq wanaagsan. Caado kale oo layaableh oo uu leeyahay ayaa ah inuu jecel yahay inuu jiifo hawo-mareenka markay soo baxdo, wuxuu umuuqdaa mid aad u eg Monroe oo dhogortiisu duufaanayso. '
'Kani waa Gizmo, Kujo walaalkiis. Isagu waa Pomeranian madow aan caadi ahayn. Isagu waa badbaadintayda 'Pom' waana mid ka mid ah sababihii aan jacaylka ugu qabay calanka. Waxaa lagu muujiyey halkaan isagoo 2 sano jir ah oo culeyskiisu yahay 5 rodol. Isaga iyo Kujo waa laba digir oo ku dhex jira qoryo. '
Pommania P Diddy waa tusaale qurxoon oo taranka oo leh madax kaamil ah oo cabirkiisu sax yahay iyo jaakad. Lahaanshaha sawirka Pommania Pomeranians
Pomm Pomeranania Little Star waa tusaale ka mid ah sida eey Pomeranian ah oo buuxiya heerarka show waa inuu u ekaadaa. Lahaanshaha sawirka Pommania Pomeranians
Xiriiriyaha, Leila iyo 'walaalkood' koriyaha 'Dash
Beau eeyga yar ee Pomerania ee 7 toddobaad jira— 'Waan jecel nahay inuu kala jajabnaado waa qof aad u xiiso badan oo jecel inuu la ciyaaro qof walba!'
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Pomeranian
Sawirada Rummaanka 1
Sawirada Rummaanka 2
Sawirada Rummaanka 3
Sawirada Rummaanka 4
Sawirada Rummaanka 5
Eeyaha Pomeranian: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
basset hound iskudhaf retriever qas
buluug buluug ah oo buluug ah oo laysku daro sanka buluugga ah